Moscow death toll from COVID-19 rises to 4,666
Moscow [Russia], August 17 (ANI/Sputnik): Moscow has registered 10 deaths of patients infected with COVID-19 over the past 24 hours, bringing the Russian capital's death toll to 4,666, the city's coronavirus response center said in a statement on Sunday.
Moscow [Russia], August 16 (ANI/Sputnik): Moscow has registered 11 deaths of patients infected with COVID-19 over the past 24 hours, bringing the Russian capital's death toll to 4,656, the city's coronavirus response center said in a statement on Saturday.
Moscow [Russia], August 15 (ANI/Sputnik): Moscow has registered 12 deaths of patients infected with COVID-19 over the past 24 hours, bringing the Russian capital's death toll to 4,645, the city's coronavirus response center said in a statement on Friday.
Moscow [Russia], August 14 (Sputnik/ANI): Moscow has registered 11 deaths of patients infected with COVID-19 over the past 24 hours, bringing the Russian capital's death toll to 4,633, the city's coronavirus response center said in a statement on Thursday.
Moscow [Russia], Aug 8 (ANI/Sputnik): Moscow has registered 14 deaths of patients infected with COVID-19 over the past 24 hours, bringing the Russian capital's death toll to 4,560, the city's coronavirus response centre said in a statement on Friday.